श्रीमती अर्कैसँग भागेपछि श्रीमानले पुत्ला बनाएर गरे श्रीमतीको अन्तिम संस्कार, छोराले लगाए आगो – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/श्रीमती अर्कैसँग भागेपछि श्रीमानले पुत्ला बनाएर गरे श्रीमतीको अन्तिम संस्कार, छोराले लगाए आगो
एजेन्सी । भारतमा श्रीमती प्रेमीसँग भाँगेको भन्दै एक जनाले श्रीमतीको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरेका छन् । भारतको बोकारो जिल्लाको तेलो थाना क्षेत्र निवासी राजिव कुमारले हिन्दु रिति–रिवाज अनुसार श्रीमतीको पुत्ला बनाएर उनको विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार गरे । उनका छोराले आफ्नी आमाको पुत्लालाई आगो लगाए ।
राजिवले अब उनका लागि उनकी श्रीमतीको निधन भइसकेको छ । ‘अब मेरो उनीसँग र उनको मेरो परिवारका कोही पनि सदस्यसँग कुनै सम्बन्ध छैन । मेरी श्रीमती दुई सन्तानकी आमा हुँदासमेत गाउँकै एक व्यक्तिसँग घरबाट भागिन् ।’ श्रीमानको आरोप अनुसार उनकी ३२ वर्षीया श्रीमती आफ्नो प्रेमीसँग भागेकी छिन् । उनी अहिले आफ्ना प्रेमीसँग राँचीमा बसिरहेकी छिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : विश्वकै महँगो चकलेट, मुल्य १ लाख ६० हजार !
चकलेट खान मन नपराउने को होलान र ? चकलेटको स्वादले जो कोहीलाई लोभ्याउने गर्दछ । बजारमा विभन्न स्वाद र रंगमा चकलेट पाइन्छ । चकलेटको गुणस्तर र परिमाण अनुसार त्यसको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । साधारणतया एक चकलेटको मुल्य एक रुपैयाँदेखि २–४ सयसम्म पर्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, एउटै चकलेटको मूल्य डेढ लाखभन्दा बढी पर्छ भन्ने सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । भारतको चर्चित आइटीसी कम्पनीले बनाएको चकलेटको मुल्य सुन्दा होस् उडाउने खालको छ ।
भारतको चकलेट उत्पादक कम्पनी आइटीसीले तयार पारेको चकलेट विश्वकै सबैभन्दा महंगो चकलेटका रुपमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो चकलेटको मूल्य प्रतिकिलो झण्डै ७ लाख रुपैया पर्दछ । जस अनुसार एक डब्बा चकलेटलाई मात्र भारु १ लाख अर्थात नेपाली १ लाख ६० हजार पर्ने गर्छ ।
एक डब्बामा १५ ग्राम वजनका १५ वटा नै हुन्छन् । ३ प्रकारको स्वादमा तयार पारिएको ट्रिनिटी चकलेट टाहिटियन भेनिल्ला बिन्ससंगै टोस्टेड कोकोनट गार्निस, घाना डार्क चकलेट र जमैका ब्लू माउन्टेन कफीको मिश्रणमा बनाइएको कम्पनीको दाबी छ ।
चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट एकजनाको ज्यान गयो
कोरोना भा’इरस हराएका १०३ वर्षका वृद्धले गरे पाँचौ विवाह